२७ वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक गरे वित्तीय विवरण, कुनको कति नाफा ? (सूचिसहित) — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > २७ वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक गरे वित्तीय विवरण, कुनको कति नाफा ? (सूचिसहित)
२७ वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक गरे वित्तीय विवरण, कुनको कति नाफा ? (सूचिसहित)
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकसम्म वाणिज्य बैंकहरूको नाफामा खासै सुधार नभएको तथ्यांकले देखाएको छ । २७ वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार चैतसम्म बैंकहरूले ४५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ नाफा गरेका छन ।
यो गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १ दशमलव ३५ प्रतिशत मात्रै बढी हो । गत आवको यही अवधिसम्म ४४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेका थिए ।
२७ वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार चैतसम्म बैंकहरूले ४५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ नाफा गरेका छन ।बैंकहरूको मुख्य व्यवसाय आम्दानी मानिने खुद ब्याज आम्दानीमा ३० प्रतिशतले कमी आएपछि नाफामा सुधार नभएको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ  ।
बैंकहरूको आम्दानीका अन्य माध्यम शुल्कबाट हुने आय र अन्य सञ्चालन आम्दानी पनि घटेको छ । डलरको भाउमा भएको वृद्धिले भने बैंकहरूको विनिमयबाट हुने आम्दानी ६ प्रतिशतले बढेको छ । हाल प्रतिडलरको मूल्य १ सय २१ रुपैयाँ छ ।
पछिल्लो समय बैंकहरूमा बढेको प्रतिस्पर्धा र बन्दाबन्दीका कारण चैतको २० दिनमा उठ्ने शुल्कहरूका कारण पनि नाफा घटेको बैंकरहरूको भनाइ छ । ‘बैंकहरूको नाफा केही अघिदेखि नै सुस्तिन थालेको थियो, तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण बैंकहरूको अन्य आम्दानीको आधार शुल्क र कमिसन घटिरहेको थियो,’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने ।
विदेशी मुद्राको कारोबारसमेत बन्दाबन्दीका कारण रोकिएकाले यसमा हुनेभन्दा कम दरमा मुनाफा भएको बैंकरहरू बताउँछन । यो अवधिमा बैंकहरूले ९८ अर्ब रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानीबाट कमाउँदा १७ अर्ब शुल्क तथा कमिसन, विदेशी मुद्रा विनिमयबाट ७ अर्ब र अन्य सञ्चालन आम्दानीबाट २ अर्ब २७ करोड कमाएका छन ।
कुनको बैंकको कति नाफा ?
२०७७ जेष्ठ १ गते ०७:३७ मा प्रकाशित
काठमाडौंमा ‘झ्यालबाट छिर्‍यो’ कोरोना !
गृह मन्त्रालय कडा रुपमा प्रस्तुत : यी हुन् पास बिना चल्न पाउने सवारी साधन, पास लिन अब गर्ने ?
चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री लिएर फर्कियो जहाज
सरकारले भोलीदेखि मुलुकका तीन ठूला शहरमा कोरोना भाइरसको परीक्षण सुरु गर्ने